Xulka Qaranka Soomaliya Oo Ka Qeyb Galaya Is Reeb Reebka-Chan 2017,Xili Ay Ku Wajahanyihiin Dalka Jabuti.
Wednesday, April 25th, 2018 - 13:27:41
Wednesday April 19, 2017 - 10:50:56 in Wararka by Kubad Bile
Xulka qaranka Soomaliya ayaa sanadkaan ka qeyb galaya is reeb reebka koobka Chan oo ah koobka labaad ee laga ciyaaro qaarada afrika waxaana ciyaaro ciyaartooyda ka ciyaartooyta horyaalada dalalkooda,xili sanadkaan xulka qaranka Soomaliya ay ka soo muuqanayaa xidigo cusub oo laga soo xulay kooxaha kala duwan ee dalka.
5-November 2016-: Haruna Mawa ayaa loo magabaacay jagada xilka macalinimo ee xulka qaranka Soomaliya,isagoo xilka macalinimo ka badalay macalinkii hore reer Uganda Charles Nytazi.
Haruna ayaa horay ugu soo ciyaaray Sports Club Victoria University oo ka dhisan dalka Uganda,tababare Harun ayaa soo xushay 24-ciyaartooy oo ugu qeyb galaysa koobka Chan,xili kulankiisa kowaad uu leeliyo xulka qaranka Soomaliya oo la ciyaaridoono koonfurta Sudan 21-April,iyagoo lugta kowaad kuwada ciyaaridoono dalka Jabuti.
Xulka Qaranka Soomaliyaa ayaa lugta kowaad is reeb reebka koobka Chan la ciyaarioono dhigooda South Sudan,iyagoo wada ciyaaridoono 21-04-2017,waxayna ku ciyaaridoono dalka Jabuti 30-04-2017.
South Sudan ayaa lugta labaad kusoo dhawaynaysa xulka qaranka Soomaliya,iyagoo kuwada ciyaarino garoonka Juba Stadium oo ku yaala caasimada koonfurta Sudan.
Si kastaba xlalka qaranka Soomaliya iyo koonfurta Sudan ayaa 21-bishan kuwada ciyaaridoono dalka Jabuti,iyagoo lugta kowaad wada ciyaaridoono Maalinta jimcaha ee fooda nagu soo haysa,balse lugta labaad ayay kuwada ciyaaridoonaan 30-April 2017,iyagoo kuwada ciyaaridoono garoonka Jubba Stadium ee dalka South Sudan.